I-Deep Groove Ball Bearings Ukufaka Inkqubo Yezinqubo - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-Deep Groove Ball Bearings Ukufaka imininingwane yezinqubo
Ukwakha insimbi yokucacisa inqubo iqukethe i-carbide eyinkimbinkimbi (Fe, Cr) i-7C3, iyashisa e-austenite ngenkathi ijubane elincane, kanti ukuqhutshwa kwe-thermal ukushisa kuyimpofu, ngakho-ke, ukuphoqa isivinini sokushisa kumele kuphuze. Ukushisa okushisa kakhulu kakhulu noma ukuhlala endaweni ephakeme yokushisa kuyinde kakhulu, kulula ukukhiqiza amawele amabili nokulimaza ukusebenza kwensimbi. Kodwa futhi ngenxa yokuqina kanzima kwe-conductivity ye-steel and poor, emva kokufakela ukupholisa kufanele futhi kuphuze, noma kube lula ukukhiqiza imifantu. Uma izinga lokushisa liphakeme kakhulu, kulula ukukhiqiza i-mesh carbide, isakhiwo se-carbide esinama-coarse esimweni esilandelayo asinakuqedwa. Izinto ezisemgangathweni wokushisa kwe-deformation lokushisa, ukusabalalisa kwe-plastic low, ukufaka ukusebenza okuncane kuyimpofu, izinto ezibunjiwe nesakhiwo zinezidingo ezikhethekile.
Ukuze uhlaziye kangcono izinga lokuzwakala komsindo, ngokulinganisa kwangempela, isethi ngayinye yezintambo zokulinganisa phambili nangemuva kwamaphuzu amathathu we-vibration value uniform, thatha inani elikhulu lokuhlolwa njengenani elibalulekile lokubambezela kokuthwala.
(1) Njengoba kubonakala kuThebula 2, i-fat noise grease inganciphisa kakhulu ukuthwala ukudlidliza nomsindo, i-100% emva kokugcwalisa amafutha ukuze kuhlangatshezwe nezidingo zeqembu le-Z2 (40 dB), 98% kuya kwezimfuneko zeqembu le-Z3 (38 dB) Umkhiqizo unembile ethile yokugcina. Ngenxa yokuzinza komshini, ikhwalithi yesondo lokugaya phakathi nenqubo yokugaya nokungafani kwekhwalithi yokugqoka isondo, ukungafani kwe-oilstone ne-Whetstone esikhundleni futhi izinga lokugqoka esimisweni esihle kakhulu sesiteshi kunzima ukugwema ithonya lesistimu. Izinqubo zokucubungula ukuchitshiyelwa kwecala, kukhona izinga elithile lokungazami, ngakho idatha ye-vibration kuDatha 2 yedatha inezinga elithile lokusabalalisa.
(2) inqubo yokuhlola ithola ukuthi amaqoqo amahlanu okuthwala ukuhlolwa okukodwa kokulinganisa okulinganiselwe, ahlanza amafutha, ukubhubhisa futhi athola ukuthi isiteshi sesiteshi se-ultra-fine sishiya, sishiya imbali yesondo . Lokhu kubonisa ukuthi isikhungo sokuguqula i-Whetstone ne-groove yesiteshi emva kokugaya isikhala sokuvinjelwa kokuphambuka okuthile, okuphazamisa ikhwalithi yangaphezulu yesiteshi. Ngesikhulumi ukukhulisa isignali yomsindo ukucacisa amaqoqo ama-5 womsindo ongajwayelekile, qaphela i-grease yangaphakathi etholakala ngaphakathi kwe-intrusion yomzimba wangaphandle, isiteshi sekhwalithi enhle kakhulu asiphezulu.
(1) Isivivinyo sokubaluleka kokugcina senziwa ngokusebenzisa inqubo entsha ye-6204E. Imiphumela yokuhlolwa kokugcina kokudlidliza iqinisekisa ukuthi kwenzeke kanjani futhi kuphumelele kwenqubo futhi iqoqa isipiliyoni sokukhiqiza ekukhiqizeni umsindo ophansi.
(2) ukuthuthukisa ukuphela kwesilinganiso sangaphandle sokunemba kwesimo sokugaya isiteshi, ukuhleleka kokuhlinzekwa kwenqubo enhle, kusebenza kahle ekusebenzeni izinga eliphezulu lomzila wesiteshi. Lungisa imingcele yezinqubo ze-ultra-fine, ukuze ubuso bakhole imigqa efanelwe, emigqabeni enhle, kunganciphisa ngokuphumelelayo ukuphatha amazinga okudlidliza nokuzwakalayo.
(3) ukuthuthukisa ikhwalithi yokuthwala umhlangano, ukuqaliswa okuqinile kwezingqinamba, ukuvimbela ukuqhuma kwamanzi, kepha futhi kuncishiswe ukuthwala izinyathelo zokududuza nezomsindo.
Ukuhluleka kwe-stainless steel bearing fracture kubangelwe ikakhulu ngenxa yeziphambeko futhi kugcwalisa izici ezimbili. Lapho umthwalo wangaphandle udlula umkhawulo wamandla wempahla obangelwa ukuhlukana kwengxenye eyaziwa ngokuthi ukuphulwa ngokweqile. Isizathu sokulayisha ngokweqile ikakhulukazi ukuhluleka kokusingathwa noma ukufaka okungalungile. Ukufaka izingxenye ze-micro-cracks, shrinkage, bubbles, ama-debris amakhulu angaphandle, izicubu ezishisa kakhulu nokushisa kwendawo kanye nezinye iziphambeko emthelela wokugqithisa ngokweqile noma ukudlidliza okukhulu kuzophinde kubangele ukulimala endaweni engafanele, eyaziwa ngokuthi i-fracture engafanele. Kumele kuqashelwe ukuthi ukukhiqizwa kwenqubo yokukhiqiza, izinto ezibonakalayo ekuhloliseni kabusha kwefektri, ukulawula ukukhishwa kwekhwalithi yokushisa nokushisa, ukulawulwa kwenqubo yokucubungula kungacutshungulwa ngokunembile ngethuluzi ukuthi kukhona ukukhubazeka, ikusasa kufanele liqinise ukulawula. Kodwa ngokujwayelekile, ukuhluleka kwezingqwembe zensimbi ezingenalutho ngokuvamile kwenzeka ikakhulukazi ukuhluleka ngokweqile.